कांग्रेसको समय सापेक्ष नीति र कार्यक्रम खोर्इ? - हिमाल दैनिक
कांग्रेसको पूर्नजीवन शृंखला-२
नेपाली कांग्रेसको पूनर्जीवनको विषयलाई केन्द्रमा राख्दै हिमाल दैनिकले पछिल्लो समय नेपालको राजनीति र विशेष गरी यो पार्टीलाई नजिकबाट चिन्दै र विश्लेषण गर्दै आएका विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकसँग बहस र विचार विमर्शको सुरूवात गरेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रखर विश्लेषक प्रदिप गिरीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित विचारको सम्पादित अंशः
नेपालको लोकतान्त्रिक वृत्तमा यो समय नेपाली कांग्रेसको पूर्नजीवन केन्द्रीय चासोको विषय बनेको छ। कुनै पनि राजनीतिक दलको इतिहासमा उकाली, ओराली आइरहन्छन्। यसरी ओरालो लागेको बेलामा पार्टीले, खासगरी अझ भन्ने हो भने यसको नेतृत्वले सम्हालिएर कदम चाल्दा भावी विजय अझ गौरवशाली हुन सक्छ। त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ।
व्यक्ति वा पार्टीको जीवनमा विजय वा पराजय आफैंमा ठूलो विषय होइन। तर, पराजय किन भयो? त्यसका कारण के थिए? ती कारणको निवारण सम्भव छ कि, छैन? भन्ने कुरा पार्टी नेतृत्वको चिन्तनको केन्द्रमा रहनुपर्छ।
पार्टीले आफ्नो पराजयको कारण ठीक ढंगले ठम्याउन सकेन, अझ त्यो भन्दा पनि ज्यादा आफ्ना कार्यकर्तालाई बुझाउन सकेन भने कार्यकर्ता दिशाबिहिन हुन्छन्, निराश हुन्छन् र पलायनतिर अग्रसर हुन्छन्।
अर्को बाटो छ- हिजो हामी यसकारण पराजित भएका थियौं, त्यो पराजयको निवारण हुन्छ। आउनुहोस्, अब हामी नयाँ किसिमबाट मोर्चा बनाऔं र फेरि अगाडि बढौं। आगामी विजय अनिवार्य छ भन्ने सन्देश नेतृत्वले दिनसक्यो भने झन ठूलो विजय प्राप्त हुनसक्छ।
कुनै पनि किसिमको युद्वको इतिहासमा यस्ता अनेकन परिघटना देखिन्छन्। हामीसँग उदाहरणको खाँचो छैन।
तैपनि अहिले नेपाली कांग्रेसको पराजयलाई खोतल्ने हो र यसबारे ठोस ढंगबाट कुरा गर्ने हो भने, तीन विषयमा केन्द्रीत हुन सकिन्छ र हुनुपर्छ।
कांग्रेस पार्टीको पराजयका निमित्त यसको विचारधारा, सोच र कार्यक्रम कुन हदसम्म जिम्मेवार थियो? पार्टीको सांगठनिक ढाँचा,संरचना, कार्यपद्धती, पार्टीको माथिल्लो निकाय अर्थात केन्द्रीय समितिको तल्लो तहमा रहेका समितिसँगको आपसी सम्बन्ध र भूमिका कस्तो थियो? अन्तिम तर, महत्वपूर्ण कुरा त्यसको नेतृत्वले उपर्युक्त कुराहरुलाई ठीक बाटो र पाटोमा लैजान के कस्तो काम गर्यो र नेतृत्वलाई पराजयका निमित्त कुन हदसम्म दोष दिन सकिन्छ? यस विषयमा बहस गर्दा पहिले हामी पार्टीको विचारधारा र कार्यक्रममा केन्द्रीत भएर सुरू गरौं।
कांग्रेसले २०१२ सालदेखि नै लगातार आफूलाई समाजवादको पक्षधर पार्टीका रूपमा उभ्याएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने,२०१२ सालभन्दा अघि पनि कांग्रेसको नेतृत्वले समाजवादको कुरा गरिरहन्थ्यो। कांग्रेसका संस्थापक एवं विचारक नेता विपी कोइरालाले हिन्दुस्तानमा परवासमा रहँदा कांग्रेस सोशलिष्ट पार्टीमा सक्रिय भएर काम गर्नु भएको थियो।
कांग्रेसको निकटता भारतको समाजवादी पाटीसँग थियो। समाजवादी पार्टी हुँदाहुँदै पनि भारतका ज्वहारलाल नेहरुसँग उहाँको निकटता रहेको थियो। वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट कांग्रेसले समाजवाद अंगिकार गर्नुअघि नै भारतको कांग्रेस पार्टीले समाजवादी समाज निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको थियो। र पार्टीका रुपमा नेपाली कांग्रेसले भारतको राष्ट्रिय कांग्रेसको शैलीमा नै समाजवादलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको थियो।
भारतको कांग्रेस पार्टीले ज्वहारलाल नेहरूको एकल आग्रहमा समाजवाद स्वीकार गरेको थियो। पार्टीका कार्यकर्ता पंक्तिलाई समाजवादप्रति भावुक प्रतिबद्धता बाहेक केही थिएन। लगभग त्यहिबेला नेपाली कांग्रेसको वीरगञ्ज महाधिवेशनले समाजवादको लक्ष्य स्वीकार गरी आएको पनि आज झण्डै ६२ वर्ष भयो।
यहाँ एउटा सानो वस्तुगत तथ्यलाई लिएर प्रस्तुति अगाडि बढाए हुन्छ। विगत ६० वर्षमा कांग्रेसको नेतृत्वपंक्तिले अथवा यसको बौद्धिक वर्गले समाजवादका बारेमा के कस्ता लेखन र प्रकाशन गरेका छन् त? कांग्रेसको विचारधाराका कुरा गर्दा यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ।
अहिले पनि समाजवादका नाउँमा चर्चा गरिरहँदा कांग्रेसका एक मात्र विचारकका रूपमा मानिएका विपी कोइरालाका केही अन्तरवार्ताबाहेक लेख रचनाको कुरा गर्दा दुई हातका औंलामा गणना गर्न सकिने संख्या बाहेक कुनै साहित्य यसविषयमा पाँइदैन। विपीको समाजवादका बारेमा लेखिएका लेख रचना दश थान पनि पुग्दैनन्।
अर्को अपेक्षाकृत तर, अप्रिय कुरा भन्नुपर्दा, विपीका समाजवाद सम्बन्धी लेखमा पनि प्रशस्त अन्तरविरोधहरु छन्। त्यी अन्तरविरोधहरू विपी कोइरालाका सुदृढ राजनीतिक जीवनसँग सम्बन्धीत छन्। विपी प्रधानमन्त्री रहँदा अगाडि सार्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यंक्रम, बजेट, कांग्रेसको तत्कालिन घोषणापत्र र त्योभन्दा पनि बढ्ता उहाँले केही गन्यमान्य व्यक्तिलाई दिनु भएको अन्तरवार्ताबाट पढ्न सकिन्छ।
विपीले तत्कालिन भारतका नेपाल विशेषज्ञ अनिरूद्र गुप्तालाई निकै मार्मिक अन्तरवार्ता दिनुभएको थियो र त्यो प्रकाशित पनि भइसकेको छ। त्यो अन्तरवार्तालाई विपीको प्रधानमन्त्रीकालिन समाजवादी विषयको स्रोत मान्न सकिन्छ।
सन् १९६९ मा विपीले भारतको वनारस विश्वविद्यालयमा गान्धी शताब्दी समाहरोहमा समाजवाद र आर्थिक पुननिर्माणका बारेमा एउटा लामो झण्डै २० हजार शब्दको आलेख प्रकाशित गर्नुभएको थियो। त्यसबाट पनि विपीको नेपालको आर्थिक पुननिर्माणबारे भएको विचार थाहा हुन्छ।
यी दुई आलेखपछि उहाँको विचार बदलिएको देखिन्छ। अन्त्यमा उहाँले भन्न थाल्नुभयो-गान्धीजीको मोडल नै समाजवादको मोडल हो। त्यसक्रममा उहाँले भन्दै जानु भयो, ठूला ठूला योजनाहरुको काम छैन, एयरपोर्ट बनाएर काम छैन। किसानसँग दुहुनो गाई होस्, एक हल गोरू होस् र ऊ गाउँमा बसेर आत्मनिर्भर र रोजगारमुखी अर्थतन्त्र चलाउन सकोस्। विपीको सिद्धान्त यसैलाई सहि रुपमा मान्न सकिन्छ।
यतिबेला तपाई हामीले बारम्बार भन्ने गरिरहेका छौं- विपीको सपना साकार पार्छौ, विपीको सपना साकार पार्छौँ। उता एमाले र माओवादीले भ्रमकै खेती गरेको भन्न सकिन्छ किः उनीहरुले मदन भण्डारीको नाममा जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादको नाममा २१औं शताब्दीको नौलो जनवादको व्यापक चर्चा परिचर्चा चलाए। यी दुई दस्तावेजको मर्म के छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर, यी दुई दस्तावेजका बारेमा केन्द्रदेखि गाउँतहसम्म आफ्ना उनीहरुका नेता, कार्यकर्ता शिक्षित र दिक्षित भए। त्यसका लागि चोटादेखि कोठासम्म, कलेजदेखि विश्वविद्यालयसम्म यो बहसको विषय बन्यो। वामपन्थीहरुको सैद्धान्तिक आधार यहि रह्यो।
अब वामपन्थीहरुले कांग्रेस विरूद्ध प्रचार गर्दा कोशी बेच्यो, गण्डक बेच्यो, भारतसामू घुँडा टेक्यो, भारतीय नाकावन्दीको विरोध गरेन भन्ने छँदै थियो। २१औं शताब्दीमा अघि बढ्दै गर्दा आजका मितिमा हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ कि, विगत ७० वर्षको इतिहासमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको सैद्धान्तिक, र वैचारिक दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पार्नका निम्ति कुनै ठोस कदम चालेको छैन।
विचारधारा भनेको आकाशमा उब्जिने कुरा होइन। याे नेपाली समाजमा आउँदै गरेका परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेर तय गर्नुपर्छ। विचारधारा आफैंमा अलग कुरा पनि होइन। विचारधारा अथवा आदर्श निर्गुण हुन्छन्। हामी समाजवाद, स्वतन्त्रता अथवा बन्धुत्व भन्छौँ, यीनै समानता, स्वतन्त्रता र बन्धुत्वको आदर्शलाई आजको नेपालको वस्तुस्थिति र राष्ट्रिय आयको सन्दर्भमा यसो गर्दा राम्रो हुन्छ है, भन्ने कार्यक्रम खोइ? हामीले विचारधाराको कार्यक्रमको हकमा पार्टीभित्र कहिल्यै पनि बहस चलाएका छैनौं।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नप्राप्तिपछि दुई, तीन वटा महासमितिका बैठक भए। महासमितिको आखिरी गम्भीर बैठक पोखरा र नेपालगञ्जमा भएजस्तो लाग्छ। ती बैठकमा केही साथीहरुले आर्थिक विषयमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। साथीहरुले बोलेकै कारणले हो कि क्या हो, त्यसपछि नेतृत्वले एक प्रकारले महासमिति बैठक बोलाउनै छाडिदिएको छ। महासमितिको बैठक नै पार्टीको सैद्धान्तिक बहस र छलफलको उपयुक्त थलो हुने थियो।
तर, संविधान निर्माण प्रक्रियाको नाउँमा बैठक समयमा बस्न सकेको छैन। यता आएर नयाँ परिस्थितिको नाउँमा महासमिति सदस्यहरुको संख्या पनि बेसवाल बढेको छ। पार्टीले कम्तिमा वर्षको एक पटक पार्टीको मध्यम वर्गिय नेतृत्व पंक्तिलाई राखेर नेपालमा आएको परिवर्तनको सन्दर्भमा के कस्ता कार्यक्रम समय सापेक्ष हुन सक्छन् र त्यसले जनआकाक्षांलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ भन्ने कुरामाथि छलफल हुन सकेको छैन।
यो भएको छैन भन्ने एउटा कुरा हो। अब कसले गर्ने, के गरी र कसरी गर्ने? व्यक्तिगत स्तरमा यो गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरा अर्को पाटो हो। तर, व्यक्तिगत जिम्मेवारीको हिसाबले हेर्दा यसमा सबैको जिम्मेवारी रहन्छ। हामीले कार्यक्रम र सिद्धान्तको स्पष्टिकरणमा विशेष समय दिएकै छैनौं।
म वर्तमान पराजयलाई यस भूमिकाप्रति रहेको हाम्रो उदासिनता र मेरो उदासिनतालाई छुट्याएर हेर्न सक्दिनँ।
25/01/2018, 04: 44: 36 मा प्रकाशित
21584 पटक पढीएको